Xildhibaan horay uga tirsanaa baarlamanka Kenya oo la dilay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dabley hubeysan ayaa xalay saqdii dhexe deegaanka Syokimau ee gobolka Machakos ee dalka Kenya ku toogtay xildhibaan horay uga tirsanaa baarlamaanka dalkaas, kaasoo la oran jiray, Philip Godana.
Weerarkaasi waxaa ka badbaaday xaaska iyo saddex caruur ah oo uu dhalay ninka la dilay. Ragga weerarka geystay waxay hoygaasi ka qaateen hanti la sheegay in ninkaasi uu lahaa.
Hay’adaha amniga Magaalada Nairobi oo ku baxay hoygiisa, ayaa waxay ka sameeyeen baaritaano la xiriira qaabka uu weerarku u dhacay. Sidoo kalana waxay su’aalo weydiiyeen xaaskiisii iyo caruurtii uu dhalay.
Taliyaha booliiska gobolka Machakos, Gideon Amalla ayaa saaka booqday guriga xildhi-baanka hore ee toogashada lagu dilay, isagoo suxufiyiinta u sheegay inuu uga tacsiyeynayo qoyska dilka Godane.
Lama oga ilaa hadda cidda dilkaas geystay, mana jirto cid sheegatay, hase ahaatee waxaa jira warar sheegaya in kooxda weerartay guriga mas’uulkaas ay doonayeen iney dhax geystaan balse mas’uulku is difaacay, kuna dhintay is rasaaseynta.
7-dii bishaan waxaa Magaalada Nairobi lagu dilay George Muchai oo ka tirsanaa Xildhibaanada Baarlamaanka Kenya.
Dilka Xildhibaankaasi waxaa loo soo qabtay hal nin oo Khamiistii ka soo muuqday Maxkamad ku taala Nairobi.